people Nepal » प्रहरी ईन्काउण्टर फेक की रियल ? प्रहरी ईन्काउण्टर फेक की रियल ? – people Nepal
काठमाडौ । नेपाल प्रहरीले आत्मारक्षाका लागी गोली चलाउनु स्वभाविक हो । तरपनि अपराधी नै निर्मुल पार्ने बहानामा फेक ईन्काउण्टर गर्ने गर्दै जाने हो भने कानुनी राज्यको धज्जी मात्र उड्दैन । प्रहरीप्रति जनबिश्वास समेत घटदै जाने निश्चित छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा रियल भन्दा पनि फेक ईन्काउण्टर फेसन जस्तै बनेको अनुमान गर्न कठिन छैन । राजधानीमा बिगत ५ बर्षयता भएका घटनाहरुलाई नियाल्दा प्रहरी ईन्काउण्टर फेसन जस्तै बनेको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा नयाँ प्रमुख आउनेबित्तिकै रियल या फेक जे भएपनि ईन्काउण्टर गर्ने प्रचलन जस्तै बनेको छ ।
घटना १ः पुष्कर कार्की महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा प्रमुख रहेका बेला २०७१ साउन २१ ग्ते गुण्डा नाईके दिनेश अधिकारी चरीको ईन्काउण्टर ।
घटना २. सर्बेन्द्र खनाल प्रमुख रहेका बेला २०७२ भाद्र ३ मा गुण्डा नाईके कुमार घैँटेको ईन्काउण्टर ।
घटना ३ ः दिनेश अमात्य प्रमुख रहेका बेला २०७४ साउन २३ गते प्रबिण खत्रीको ईन्काउण्टर ।
घटना ४ः दिबेश लोहनी प्रमुख रहेका बेला सुन तस्करीका नाईको चुडामणी उप्रेती गोरे को अपुरो ईन्काउण्टर
घटना ५ : धिरज प्रताप सिंह प्रमुख रहेका साउन बेला २०७५ साउन २१ मा बालक अपहरणको आरोपमा गोपाल र अजय तामाङको ईन्काउण्टर ।
यी पछिल्ला बर्षका केही तथ्यहरुले प्रहरी रियलमा भन्दा पनि पपुलारिटीका लागी ईनकाउण्टर गरिरहेको छ की भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यी सबै ईन्काउण्टर लाई फर्किएर हेर्ने हो भने र मृतकका आफन्त र उनीहरुको छिमेकी देख्नेसुन्नेको भनाइृलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरु सबैलाई फेक इृन्काउण्टर गरिएको छ । अर्थात उनीहरु जवाफी कारबाहीमा नभई उनीहरुलाई प्रक्राउ गरेर मारिएको छ अनि ईन्काउण्टर भनिएको छ । ठोस प्रमाण नभएसम्म उनीहरु ईन्काउण्टरमा मारिए भन्नु र पत्याउन बाहेक अर्को बिकल्प पनि छैन ।
पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि स्थानीय र देख्नेसुन्नेहरु गोपाल र अजय तामाङलाई कोठाबाटै नियन्त्रणमा लिएर फेक इृन्काउण्टर गरिएको आरोप लगाईरहहेका छन । अपराधीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हुँदै होईन,तरपनि यसरी पपुलारिटीका लागी फेक ईन्काउण्टरको योजना रच्दै जाने हो भने कानुनी राज्यको उपहास शिवाय केही होईन ।
आपराधिक मनोबृतिका मानिसहरु लाई संरक्षण गर्नु हुन्न तरपनि उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन गरी नक्कली ईन्काउण्टर गर्नु पनि पक्कै राम्रो होईन ।
पछिल्लो घटनामा पनि यहि बिषय लागु भएको छ । यदि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन मात्र सकेको भए घटनाको बास्तबिकता सार्बजनिक हुने थियो । तर यो घटनामा प्रहीले आफै प्रमाण नष्ट गरेको छ ।
घटनामा संलग्न दुबैजनाको मृत्यु भएपछि यो घटना केही शंकास्पद समेत बनेको छ । उनीहरुको मृत्युपछि पिडितका आफन्तले क्षतिपुर्ति पाउने बाटो समेत बन्द गरिएको छ । प्रहरीले जवाफी कारबाही भनेपनि जनताले पत्याउने अबस्था छैन । यस्ता घटना आगामी दिनमा दोहोरिँदै जाने र फेक ईन्काउण्टर बढदै जाने हो भने नागरिकले सुरक्षाको सामान्य प्रत्याभुति गर्न पाउने अबसरबाट समेत बञ्चित हुने अबस्था सिर्जना हुन्छ ।